यी डक्टर जसले सडक दु’र्घटनामा परेका हजारौ घा’ईतेलाई बचाए तर आफैलाई बचाउन सकेनन ! – Gandaki Chhadke
यी डक्टर जसले सडक दु’र्घटनामा परेका हजारौ घा’ईतेलाई बचाए तर आफैलाई बचाउन सकेनन !
By गण्डकी छड्के On Nov 18, 2021
काठमाडौं – दु’र्घटनामा घा’इते भई राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको आइसीयूमा उपचारत डा दीपक खरेलको नि’धन भएको छ। ट्रमाका निमित्त मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा प्रमोद जोशीले डा खरेलकाे आज विहान ८ बजेर २३ मिनेट जाँदा नि’धन भएको जानकारी दिए।
डा खरेल कार्तिक २१ गते सडक दु’र्घटनामा परी ग’म्भीर घा’इते भएका थिए। टाउको र घाँटीमा चो’ट लागेका उनको बुटवलको एक अस्पतालमा लगिएको थियो। तर त्यहाँ उपचार संभव नभएपछि काठमाडौंको काठमाडौंको मेडिसिटी अस्पतालमा रिफर गरिएको थियो।
आर्थिक स्थिति कमजोर भएका कारण उनलाई ट्रमा सेन्टरमा रि’फर गरिएको हो। ट्रमा सेन्टरमा उनको न्यू’रो स’र्जन डा राजीव झा नेतृत्वको टोलीले उपचार गरिरहेको थियाे। डा खरेल कपिलवस्तु सामुदायिक अस्पतालमा कार्यरत थिए। उनको सबै उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने बताएको थियो।
दीपक तिहारको भाइटीकाको दिन बुटवलमा सडक दु’र्घटनामा परेका थिए । मोटरसाइकलको पछाडि बसेर यात्रा गरिरहेका बेला सडक दु’र्घटनामा परेका थिए ।
त्यो रात २७ पटक कस्ले कल गरेको थियो भुपेन्द्रलाई ?
कर्णालीमा मन्त्रालय बाँडफाँडमा रस्साकस्सी, चार मन्त्रालय नछाड्ने माओवादीको निर्णय